Buraannews.com » Guddoomiyaha Galgaaduud “waan ra jeyanaa in Gobollada Dhexe loo sameeyo Maamul ay ku Mideysayihiin
Ururada siyaasada Puntland oo xafiisyo furanaya Dhageyso: madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Farataag” Dowladdu iyada ayaa diiday sharcigii lagu dhisay iyada ayayna u taalaa, Dhageyso:Wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland oo maanta sagootisay dhaqaatiir loo dirayo talaalka 4 malyan oo xoolaha Puntland ah . DHGYASO Suldaan Maxamed” Xamar marnaba ka maarmi mayno” Xisbiga UCID garabka UK oo Hambalyo u diraaya dhamaan Shacabka reer Soomaaliland meelay joogaanba. SOMALI LINKS
Guddoomiyaha Galgaaduud “waan ra jeyanaa in Gobollada Dhexe loo sameeyo Maamul ay ku Mideysayihiin
September 14, 2012 - Written by reporter2 - Edited byreporter2 Axmed Yuusuf Ciyoow Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud ayaa waxaa uu ka war bixiyay aragtidiisa ku aadan Maamulada kusoo badanaya Dalka Soomaaliya gaar ahaan Gobolka Galgaduud.
Waxa uu ka hadlay Warar maalmihii dambe soo baxayay oo ku aadanaa in Maamulada ka jira Gobollada Dhexe ee Dalka loo sameynayo Hal Maamul oo ay ku mideysan yihiin.
Guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegya in Maamulkiisu u soo dhaweynayo in ay midoobaan Maamuladaasi oo la sameeyo Maamul lagu mideysanyahay oo uu yeesho Gobolkaasi.Axmed Yuusuf Xasan Ciyow ayaa sidoo kale waxa tilmaamay in arintaasi ay kala hadleen Maamuladda qaar si arintaasi loo hir galiyo .
Gobolada Dhexe ee Dalka waxaa ka jira Maamullo kala duwan oo hadana wadashaqeyn wanaagsan aaney ka dhexeen, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Ahlu sunna iyo Maamulka Ximin iyo Xeeb.